PressReader - Isolezwe: 2017-09-14 - Abantu abasathengi okokugqoka okubizayo - umcwaningi
Abantu abasathengi okokugqoka okubizayo - umcwaningi
Isolezwe - 2017-09-14 - EZOMNOTHO - BONISWA MOHALE
KUZOSINDA abanikazi bezitolo abeza nezindlela ezihlukile zokuheha amakhasimende njengoba iningi labantu selithenga izimpahla lisebenzisa i-internet.
UNkk Meryl Pick, umcwaningi oyi-Retail Analyst kwa-Old Mutual utshele Isolezwe ukuthi eminyakeni engu-10 edlule amasheya ezitolo zezimpahla ebebiza kodwa manje asehlile ngenxa yokuthi zehlelwa ngamakhasimende.
“Kusinda kwehlela kubanikazi bezitolo ezidayisa izimpahla ngoba abantu abasazwani nokuthenga izinto zokugqoka ezibizayo. Abaningi bakhetha ukuyobheka ezitolo ezishibhile,” kusho uNkk Pick.
Uthe abatshalizimali babheka izitolo ezithile ezenza imali ngoba akuselula ukutshala imali esitolo sezimpahla zokugqoka.
“Izitolo zezimpahla zokugqoka zehlelwa yinzuzo, lapha sibala uTruworths noWoolworths abakhala ngesimo esingesihle sokuhweba. Isitolo sezimpahla ezibizayo iStuttafords sizovala zonke izitolo emuva kokuhweba iminyaka engu-159. Kunzima ngoba abantu bathenga izinto ezishibhile,” kusho uNkk Pick.
Ugqugquzele abantu ukuthi balondoloze imali, bayitshale ezinkampanini ezikhombisa ukukhula.
“Uma isimo siqhubeka kanjena, sizobona izitolo zezimpahla zokugqoka zivalwa kodwa lezo ezinamasu amasha okuheha abantu zizoqhubeka nokuhweba,” kusho uNkk Pick.
Uveze ukuthi eminyakeni engu-10 edlule abantu babethenga izimpahla ezibizayo ukuze kucacele wonke umuntu ukuthi baphila kahle.
Njengamanje uveze ukuthi abantu bathenga noma yini eshibhile abasenandaba nokubiza kwempahla ngenxa yesimo somnotho esingesihle.
“Izitolo zezimpahla ezibizayo bezidla kahle eminyakeni edlule ngenxa yokuthi abantu bebethuthuka esimeni sabo sempilo. Esikubonayo manje wukuthi abasayisebenzisi budlabha imali yabo. Abaningi abaqashiwe kanti abanye bathembele kwizibonenelo zikahulumeni,” kusho uNkk Pick.
Imithetho yeNational Credit Regulator elawula izitolo ngokunikeza abantu izikweletu nawo uthe unomthelela ekwehliseni ukuthengwa kwezimpahla zokugqoka.
“Kudala abantu bebenikwa izikweletu budlabha kodwa manje sekunomthetho othi akufanele umuntu umnikeze isikweletu ebe esindwa yilezi anazo. Lokhu kwenzelwa ukuvikela abantu,” kusho uNkk Pick.
Ukunganikezwa kwabantu izikweletu uthe kulimaza izitolo ezifana noTruworths, The Foschini Group no-Edcon ngoba u-50% wemali eyenziwa yilezi zitolo ngeyamakhasimende athenga ngesikweletu.
Yize isimo sisibana kodwa uveze ukuthi ezinye izitolo ziyadlondlobala kwazise kuvulwa isitolo esisha sezimpahla zokugqoka okungenani kanye ngonyaka.
“Sibona izitolo zokugqoka zaphesheya ziza eNingizimu Afrika. Kukhona izitolo zethu eziqhubekayo nokudlondlobala ezifana noMr Price. Ukushibha kwempahla kwaMr Price kusho ukuthi baningi abantu abakhetha ukuya khona kunokukhithiza ezitolo ezibizayo,” kusho uNkk Pick.
Uphethe ngokuthi abantu abathenga amasheya kufanele baqaphele uma befuna awezitolo zezimpahla futhi benze ucwaningo ngezinkampani ezikhulayo batshale imali yabo lapho.
Okwamanje uthe basazobheka ukuthi izitolo zezimpahla zokugqoka zenzanjani ukuthi zihehe abathengi.